सुनचाँदी Archives - Lokpati.com
Tag - सुनचाँदी
सुनकाे मूल्य ३ सयले बढ्याे, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडौं। बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बुधबारको तुलनामा प्रतितोला ३०० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै बिहिबार सुनको मूल्य ९० हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको हो।
सुनकाे मूल्यमा थप २ सय वद्धि, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडौं। गत सोमबार ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्यमा थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला ९० हजार ६०० रुपैयाँ कामय भएको छ।
त्यस्तै, तेजाबी सुनको...
ताेलामा ४ सय बढ्याे सुनकाे मूल्य, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
सुनको भाउ निरन्तर दोश्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ। बैशाख २० गते, सोमबार सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै...
बढ्याे सुनचाँदीकाे मूल्य, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडाैँ। आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। शुक्रबार प्रतितोला ८९ हजार ९सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको छ।
मुल्य बढेसँगै आज सुन प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार हुने नेपाल...
सुनकाे मूल्यमा सामान्य गिरावट, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडौं। साताको सुरुको दिन आइतबार सुन–चाँदीको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९१ हजार ३०० रुपैयाँ कायम गरेको छ। गएको शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा...
सुनकाे मूल्य घट्याे, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडौं। सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेको छ। बिहीबार तोलमा दुई सयले बढेर ९२ हजार दुई सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ शुक्रबार ९१ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको हो।
शुक्रबारका लागि तेजावी सुनको भाउ ९१...
यस्ताे रह्याे याे साताकाे सुनचाँदीकाे काराेबार
काठमाडौं। नेपाली बजारमा यस साता पनि सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ। अघिल्लो साताको शुक्रबार तोलाको ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य यस साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा तोलामा १ हजार २ रुपैयाँले बढेर ९१...
यस्ताे छ आजकाे सुनचाँदीकाे बजारभाउ
काठमाडौं। आज सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० मा कारोबार भएको छ। बुधबार प्रति तोला ९२ हजार रुपैयाँ र बिहिबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको सुनको मूल्य शुक्रबार भने घटेको छ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापा वाला...
थप २ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाडौं। बुधबार प्रति तोला ९२ हजार रुपैयाँले कारोबार भएको सुनको मूल्यमा बिहिबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापा वाला सुन प्रति तोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने...
९१ हजार पुग्याे सुनकाे मूल्य
काठमाडौं। सुनको मूल्यमा आएको बढोत्तरी सोमबार पनि जारी रह्यो। आइतबारका तुलनामा सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेको छ।
सोमबारका लागि बजार मूल्य प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।...